I-10400LM 5000K 80W UkuLungiswa koMsebenzi wokuKhanya China Manufacturer
Inkcazo:I-80W Led Work Work Lights Fixture,120W Ukukhanya komsebenzi,150W I-Bulb Yesikhombana Yomzuzu Yesikhashana
Home > Imveliso > Izibane zoMsebenzi > Iimpawu zoLwazi eziPhathwayo ze-LED > I-10400LM 5000K 80W UkuLungiswa koMsebenzi wokuKhanya
<Ukwakhiwa koKwakha okuKhelelekileyo > : Lo msebenzi okhokelwa ngu- 80W okhokelayo wukukhawuleza kwaye kulula ukuthutha umsebenzi ohlukeneyo. I-Snap-lock Π ukukhangela phezulu ukuze uxhomeke lula. I-premium cage-coated cage yongeza ukomelela kunye nokukhusela ukuphelisa umngcipheko weglasi eyingozi.
<I-Super Bright Sweat Partner Ebumnyameni> : 8 0W ephakamileyo ye-bulb corn bulb Nikeza i-360 omni-directional beaming. Khanyisa zonke ikhonkco ngaphandle kwamabala afile. I-80W LED efana ne-250W incandescent MH okanye i-HID, ukukhanya okukrakra okufanayo kunye nenkcitho ephantsi. Iqabane elifanelekileyo kwimisebenzi yangaphandle ebusuku, njengokudoba, i-BBQ kunye nekampu.
I-80W Led Work Work Lights Fixture 120W Ukukhanya komsebenzi 150W I-Bulb Yesikhombana Yomzuzu Yesikhashana I-80W Led Light Fixture I-150W Led Ufo Light Fixtures I-80W Led Work Lighting I-Sun Led Garden Lights Fixture 20W Led Garden Light Fixtures